Ciidamo Gadoodsan Oo Xiray Isku Socodka Magaalo Ka Tirsan Galmudug |
HomeWararkaCiidamo Gadoodsan Oo Xiray Isku Socodka Magaalo Ka Tirsan Galmudug
Ciidamo ka tirsan Daraawiishta Maamulka Galmudug ayaa lagu soo warramayaa in ay maanta sameeyeen Gadood Ciidan, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in hadda ciidankaasi ay xirteen waddooyinka Magaalada Galinsoor ee Gobolkaasi Galgaduud.
Ciidanka ayaa dhawaan tababar loogu soo xiray Xerada dhanka-roone, waxaana ku hubeesan gawaarida dagaalka iyo hub culus, iydoo Magaalada Galinsoor ay dhigteen labo jidgooye, waxaana lasoo sheegayaa in ay diidadayaan in gaadiidka ay maraan waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada.
Waxaa magaalada ku xayiran sida wararka an helayno ay sheegayaan gaadiid farabadan, kuwaasi oo ahaa kuwa safar ah, waxaana la sheeegay in magaaladu ay isku cakiran tahay, maaddaama gadiid u badan kuwo ganacsi ay ku xayiran yihiin.
Ciidanku waxaa ay sheegen in Musharaad koodii aysan helin, waxaana intaas ay ku dareen in Magaaladu u kala xirnaa doonto, tan iyo inta laga siinaayo mushaarkooda oo ka maqan muddo lix bilood ah, waxaana ay qaarkood sheegeen in aysan baneendoonin jidkooyooyinka ay dhigteen Magaalada Galisoor.
Maaahan markii ugu horreysay oo ay Ciidanka Daraawiishta Maamulka galmudug ay sameeyaan gadood, waxaana tiro dhowr jeer ah magaaladaasi iyo Magaalooyin kale ka dhacay gadood noocaas oo kale ah, kaasi oo ay sameeyeen Ciidanka Daraawiishta Maamulka galmudug, waxaana ku baxay ma’uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, iyagoo xaliyay tabashooyinkii ay qabeen ciidanka horay u gadooday.